သောသီခို: ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ
တိုင်းရင်းသားနယ်စပ်ဒေသတွေအတွင်း ဒေသခံတွေအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက် ရက်စက်မှုတွေ အကြောင်း နိုင်ငံတကာက စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး အာဏာပိုင်တွေကို တရားစွဲအရေးယူနိုင်ရေး တိုက်တွန်းမှုတွေ ရှိနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ဗြောင်ကျတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုကြီးတရပ်ကို ထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ကရင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ဆိုပါတယ်။ KNU-KNLA ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ လို့ ခေါ်တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူထားတဲ့ KNU ခွဲထွက်အဖွဲ့ဝင် ၆ ဦးကို မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ မြဝတီမြို့နယ်၊ ဖလူးဒေသအနီး၊ KNU, KNLA တပ်ဖွဲ့ ကင်းစခန်းတခုအနီးကို မြန်မာစစ်တပ်က ဝင်ရောက်လာပြီး အကြောင်းမဲ့ တိုက်ခိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် စောတင်မိုသီ (Saw Timothy) က ဗွီအိုအေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
စောတင်မိုသီ ။ ။ သူတို့လာတုံးက ကျနော်တို့ တပ်သားအားလုံးက တွေ့ကြတယ်လေ။ တွေ့ကြတော့ ကျနော်တို့ ဗိုလ်မှူးကြီး သဲခီး၊ တပ်ရင်းမှူးကို အကြောင်းကြားတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးသဲခီးက သူတို့နဲ့ တပ်မှူးတွေနဲ့ စကားပြောတယ်။ တပ်မှူးတွေက ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ - ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အားလုံးကတော့ အေးအေးဆေးဆေးနေပါ။ ဘာမှစိတ်ပူ စရာမလိုဘူးလို့ ပြောတယ်။ အဲလိုပြောတော့ ကျနော်တို့ ဗိုလ်မှူးကြီးသဲခီးကနေပြီးတော့ သူ့တပည့်တွေကို ပြန် ပြောတယ်။ ဘာမှမလုပ်နဲ့။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ သူတို့သွားတာလာတာ သူတို့ဟာသူတို့ သွားပစေ၊ လာပစေ၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အေးအေးဆေးဆေးနေပေါ့လေ။ သူ့ကလေးတွေကို သူပြောလိုက်တယ်။ ပြောလိုက်တာ မကြာသေးဘူး၊ နောက်ထပ်ဆယ်မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ အဲဒီစကားပြောတဲ့အဖွဲ့ကပဲ တခါတည်းဝင်ပြီးတော့ ကျနော်တို့စစ်သားတွေကို ပစ်သွားတယ်။ ပစ်သွားရုံတင်မကဘူး။ ၆ ယောက်ကို။ ၂ ယောက်ကိုတော့ ပစ်လိုက်တာပေါ့နော်။ အားလုံးက ၈ ယောက်ပါတာကိုး။ တယောက်ကိုပစ်လိုက်တာ ဦးနှောက်ထိသွားတယ်။ နောက်တယောက်ကျတော့ အဲဒီလမ်းဘေးမှာပဲ သူတို့က အဲဒီမြစ်နားမှာပဲ သတ်ပြီးတော့ မြစ်ထဲကို ပစ်ချလိုက်တယ်။ ၆ ယောက်ကို သူတို့ဖမ်းသွားတယ်။ ဖမ်းပြီးတော့ တခါတည်း ဓားနဲ့ထိုးသတ်လိုက်တာပေါ့။ အနောက်ကို အမိန့်တောင်းပြီးတော့။ တခါတည်း အမိန့်ကနေပြီးတော့ အဲဒီလို လုပ်လိုက်ဆိုတော့ အကုန်လုံး သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒီကရင်တွေ အားလုံးအတူတူပဲဆိုပြီးတော့ အဲလိုပြောတာနဲ့။ အဲဒီတော့သူတို့ ဓားနဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ထိုးပြီးတော့ သတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့နော်။ တယောက်ကိုတော့ သူတို့မီးရှို့တယ်။ တပိုင်းကို မီးရှို့လိုက်တယ်။ ဒီဓာတ်ပုံတွေ ကျနော်တို့မှာ အားလုံးရှိပြီးသားပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ ဖြစ်တာက ဘယ်နေရာမှာလဲခင်ဗျ။ ဘယ်ရက်လဲ။
စော တင်မိုသီ ။ ။ အဲဒါ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တုံးက။ မနက် ၈ နာရီ ၂၀ မှာဖြစ်တယ်။ ဖလူး၊ ပလောခိုလို့ခေါ်တယ်။ အဲဒီနေရာနားမှာ၊ ယိုးဒယားဘက်ကမ်းနဲ့ နီးတာပေါ့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီဘက်ကတော့ KNU-KNLA Peace Council ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်။ တဖက်က ပါခဲ့တဲ့ကိစ္စကို ကျူးလွန်သွားတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဘယ်တပ်၊ ဘယ်တပ်ရင်းက တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရလဲ ခင်ဗျ။
စော တင်မိုသီ ။ ။ တပ်ရင်း ၂၃၀ က ပစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတပ်ရင်းတွေ အားလုံးက သူတို့ရဲ့ တိုင်းမှူးလက်အောက်ကပေါ့နော်။ အသစ်ရောက်လာတဲ့ တိုင်းမှူးလက်အောက်က ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်စိုးနေလင်းလို့ ခေါ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ က.စ.န မှူးက သက်နိုင်ဝင်း၊ အရင်တိုင်းမှူးအဟောင်းပေါ့။ ကျနော်ထင်တတယ်။ သူတို့ရဲ့အမိန့်တွေ ဘာတွေ မရလို့ရှိရင်တော့ သူတို့လည်း လုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ တပ်ရင်း ၂၃၀ က နဘူး အခြေစိုက်စခန်းက သာတိုးရွာပေါ့။ တတားကျိုးရွာမှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ တပ်စခန်းဖြစ်တယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ အခု ဒီဖြစ်ရပ်က ရှင်းလင်းအောင်ထပ်မေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါက တဘက်နဲ့တဘက် နှစ်ဘက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တဖက်သတ်ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်ပြီးတော့ ဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့မှ သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ ဆရာတို့က ပြောချင်တာပေါ့။
စော တင်မိုသီ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါ သဘောက စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ လူသတ်မှု ဖြစ်နေတယ်။ လူသတ်မှုဖြစ်တော့ ဘာမှမဆီမဆိုင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီက အဖွဲ့တွေကို သူတို့က ဖမ်းပြီးတော့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်တယ်ဆိုတာက အဲဒါကတော့ ရာဇဝတ်မှုပေါ့နော်။ အဲလိုမျိုး ကျနော်တို့ယူဆတယ်။ တကယ်လည်းဖြစ်တယ်။ ဒီဥစ္စာတွေက။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီတော့ ဆရာတို့က KNU-KNLA ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီနဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်နဲ့ ဆက်ဆံမှုအကြားမှာ အခု ဒီရက်ပိုင်း နောက်ဆုံးအခြေအနေက ဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ။
စော တင်မိုသီ ။ ။ နောက်ဆုံးအခြေအနေက ကျနော်တို့ position ကတော့- ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ကျနော်တို့ဆက်ပြီးရပ်တည်သွားမယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျနော်တို့က အစကတည်းက လုပ်လာခဲ့တဲ့လူ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း အပြုအမူတွေကို ကျနော်တို့က တွေ့တော့ သူတို့ဘက်က စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို သူတို့က မလုပ်ဘဲနဲ့ သူတို့ရဲ့ပုံဖော်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးက သူတို့အကျိုးအတွက်၊ သူတို့စစ်ရေးအတွက် အကျိုးရှိမယ့်ဟာကို အဲဒါပဲ သူတို့က လုပ်တယ်လေ။ ကျနော်တို့ အပိုင်းကျတော့ ဘာလဲဆိုတော့ လူထုအကျိုးရှိဖို့၊ ကရင်ရော၊ ဗမာရော၊ ရှိတဲ့ တရုတ်ရော အကုန်လုံး ကရင်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ လူထုရဲ့အကျိုးကို ကျနော်တို့က ကြည့်ပြီးတော့ ရည်စူးပြီးတော့ ကျနော်တို့ကလုပ်တာ။ အခုနောက်ပိုင်း သူတို့ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေက အားလုံး ကျနော်တို့က တွေ့တဲ့အခါမှာ၊ သူတို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘူး။ ရယူတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲဖြစ်တယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ သူတို့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို စစ်ရေးအရ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်အောင် လုပ်တယ်ဆိုတာက ဘယ်လို သာဓကတွေ ပြနိုင်လဲခင်ဗျ။ ဘယ်လိုဟာမျိုးကို ပြောတာလဲ။
စော တင်မိုသီ ။ ။ အခု ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး မလုပ်ခင်တုံးက ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့က ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အများအားဖြင့် အဲဒီ စစ်အဖွဲ့တွေက ရှောရှောရှူရှူသွားပြီးတော့ ဒီ လူထုတွေမှာ အခွန်ကောက်တာတို့၊ အများအားဖြင့်က စစ်တပ်က လူတွေပဲ အကျိုးရှိကြတယ်။ အဲဒါတခု ကျနော်တို့ တွက်ချက်မိတယ်။ နောက်ပြီး နောက်တခုက နောက်ပိုင်းမှာ Border Guard Force ဆိုတာ - အမှန်တကယ်က ဒါက ဘာမှ မဆီမဆိုင်တာ။ မလုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေ။ အရင်တုံးက ကျနော်တို့လုပ်တာက ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာက လူထုအတွက် အကျိုးရှိမယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမယ်။ အစိုးရလည်း အခွန်အကောက်ရမယ်။ ကျနော်တို့အတွက်လည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလုပ်နိုင်မယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့က ရည်စူးတာ။ အခုတော့ သူတို့က ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Border Guard Force။ နောက် ဒီ Border Guard Force က ကျနော် အစကတည်းက ပြောထားတယ် - ဒီအစိုးရကို။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းကလည်း ပြောထားတယ်။ Border Guard Force ဟာ တော်တော် ပြဿနာဖြစ်မယ့် အလုပ်။ အဲဒါ အားလုံးအတွက် မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေ။ အစကနေပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေရော။ Ceasefire လုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေမှာ အကုန်လုံး ပြဿနာပေါ်မယ့် ဥစ္စာကို ကျနော်တို့ အစကတည်းက ပြောထားတယ်။ ဒါကိုပဲ သူတို့က ဇွတ်အတင်း လုပ်ပြီးတော့ ဘာမှ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ဥစ္စာ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဆရာတို့က ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ တပ်မဟာ ၆ က အဖွဲ့တွေပေါ့နော်။ KNU ကနေ ၂၀၀၇ ခုနှစ်လောက်မှာ ခွဲထွက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအနေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တုံးကဆိုရင် ဘယ်လို ရည်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့သလဲ ခင်ဗျ။ နောက်ပိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ဒီလို အသွင်ပြောင်းဖို့ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ မရှိခဲ့ဘူးလား။
စော တင်မိုသီ ။ ။ ကျနော်တို့ ပထမအဆင့်က ကျနော်တို့ KNU က ခွဲထွက်ဖို့ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ ခေါင်းထဲမှာ တခုမှ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ လုပ်တဲ့ဥစ္စာက ရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ ရွာတွေ၊ ကရင်လူမျိုးတွေရှိတဲ့ ဥစ္စာတွေ အားလုံးကို ဒီ ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကို ငြိမ်းပါစေဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ကျနော်တို့လုပ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ လုပ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း သူတို့က ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးမယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေ၊ ဘာတွေလုပ်လို့ရမယ်။ တရားဥပဒေ၊ ဘာတွေ ညာတွေဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း ဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးတာပေါ့။ ဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးပြီးတော့ ကျနော်တို့အတူ ကရင်ပြည်နယ်ကြီး တိုးတက်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့က ရည်စူးပြီးတော့လုပ်တာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေ မဖြစ်လာဘူး။ ဒီ ၃ နှစ်ကာလ တောက်လျှောက်မှာ တွေ့လိုက်ရလို့ရှိရင် ဒီ တိုင်းမှူးတို့၊ စ.အ.ဖတို့က လုပ်စားတဲ့ဟာတွေပဲ ကျနော်တို့က တွေ့နေရတယ်။ ကျနော်တို့ လူတွေကလည်း ရိုးသားတဲ့ လူတွေဆိုတော့ အလုပ်စားခံရတဲ့ ပုံစံမျိုးလိုဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့က ကုန်ကားတွေကို ဟိုး ရန်ကုန်အထိ ဘာညာ - သူတို့က လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ အမှန်တကယ်က ကျနော်တို့က သူတို့ကို အဆမတန် ကိုယ်က ရတာနည်းနည်း၊ သူတို့က သုံးပုံနှစ်ပုံလောက် စစ်တပ်ရော၊ စ.အ.ဖ ရော အကုန်လုံး သူတို့က ယူသွားတာ။ ဆိုတော့- ဒါတွေက ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ ကရင်လူမျိုးတွေအတွက် သွားပြီးတော့ ကျနော်တို့က လုပ်လို့ရမလဲ။ လုပ်စားတဲ့ ဟာကြီးတွေ ဖြစ်နေတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင်ဆိုလို့ရှိရင် KNU ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ အင်မတန် ရိုးသားပြီးတော့ ဖြောင့်မတ်တဲ့ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တယောက်အဖြစ်နဲ့ လူသိများပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင်ကရော အခု ထောခိုခို စခန်းမှာပဲလားခင်ဗျ။ သူရဲ့ အနာဂတ် နောင်ရေးကိစ္စကရော ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနိုင်မလဲ။
စောတင်မိုသီ ။ ။ ကျနော်တို့ ထောခိုခို မှာတော့ အေးအေးဆေးဆေး ပါပဲ။ ကျနော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းထားတယ်။ လူထုတွေကို အနှောက်အယှက် မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆက်ပြီးထိန်းထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ တလောက ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာ ကျနော်တို့က ဘယ်လို approach လုပ်မလဲဆိုရင် တစ်အချက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျနော်တို့က ဆက်ထိန်းမယ်။ တဖက်က နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖျက်ပေးမယ့် ကျနော်တို့အပိုင်းက ဖျက်ဖို့ကတော့ - ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် ကျနော်တို့က ဖျက်လိုက်လို့ရှိရင် ပြဿနာက တိုင်းပြည်ရော လူထုပါ ဒုက္ခရောက်ကြမယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့အထဲမှာလည်း တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရည်မှန်းပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းလူတွေကြတော့ တမျိုး။ သူတို့က မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ပင်ပင်ပန်းပန်း အရင်တုန်းကလူတွေလို မလုပ်ခဲ့တော့ စာနာမှု အဖွဲ့စည်းရော၊ လူထုအပေါ်မှာ စာနာမှုမရှိကြဘူး။ သူတို့လုပ်တာက အခု ငါတို့ အာဏာရှိတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ဘယ်လိုလုပ်စားမလဲ - ဒါပဲ သူတို့တွေးတယ်။ အဲဒါက ပြဿနာ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် တစ်အချက်က ဥပဒေအရ အဲဒီ လူသတ်တဲ့လူတွေကို အရေးယူပေးဖို့ ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်း ကို တင်မယ်။ တင်ပြီးတော့ တစ်လအတွင်း ဘာမှ အရေးမယူဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ အထက်ကို တင်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် သူတို့ပြောတာက Disciplined Democracy ဆိုရင် စည်းကမ်းရှိရမယ်။ နောက် အစိုးရအရာရှိတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ စစ်တပ်ဆိုလိုရှိရင် ပိုပြီးတော့ သူတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ရိုးရိုးသာမန်လူတွေထက်ဆရင် သူတို့က ပိုပြီးတော့ သူတို့ အမှားလုပ်လို့ရှိရင် နှစ်ဆသုံးဆလောက် ခံရမယ်။ အဲဒါ disciplined democracy လို့ ခေါ်တယ်။ ကျနော်တို့က သူတို့ကို အရေးယူခိုင်းရမယ်။ တလအတွင်း - နောက် အသတ်ခံရတဲ့ သူ့မိသားစုတွေမှာ ခလေးတွေ ကျန်ခဲ့တယ်။ ခလေးငယ်လေးတွေ ကျန်ခဲ့တယ်။ ရှစ်ယောက်စလုံးကို လျှော်ကြေးပေးရမယ်။ ဒီ လူသတ်မှုအတွက် compensation သဘောမျိုးပေါ့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခုတော့ ဒီတင်ပြချက်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်း ဆီကို တင်ပြပြီးပြီလား။ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပါသလဲ။
စောတင်မိုသီ ။ ။ မတင်သေးဘူး။ နောက် - ကြာရင် ကျနော်တို့ တင်တော့မယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီလို တင်ပြဖို့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှိရဲ့ လား။ အခုလောလောဆယ်အားဖြင့် နှစ်ဘက်တပ်တွေက ရင်ဆိုင်နေတဲ့ သဘောမှာရှိသလား။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ ရှိသလား။
စောတင်မိုသီ ။ ။ အခုတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ရှိနေပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း ကြည့်ရတဲ့ပုံစံတွေကတော့ တိုက်တာခိုက်တာတွေ နည်းနည်းတော့ ပြန်လျှော့သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်။ ကျနော်တို့ တင်မယ်။ တင်လို့မှမရရင် သူအထက်က လူကိုတင်မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ကို တင်မယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ဖမ်းပြီးတော့ သတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စက အကြောင်းရင်ခံက ဘာများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
စောတင်မိုသီ ။ ။ ကျနော်ထင်တယ် အကြောင်းရင်ခံကတော့ အတွေးအခေါ်နည်းတဲ့ တပ်ရင်းမှုးတို့၊ တိုင်းမှုးတို့။ သူတို့ရဲ့  ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ။ တိုင်းပြည်ကို ရှုပ်ထွေးစေတယ်။ ကိုယ့်ညီအကိုတွေကို narrow minded လူမျိုးကြီးဝါဒပုံစံမျိုးနဲ့ အဲဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့ နောက်ပြီးတော့ စစ်သွေးကြွနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ကြီးတဲ့လူက ငယ်တဲ့လူကို ဘယ်လိုနိုင်ရမလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အနိုင်ကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်။ စစ်ရူးရူးတဲ့ပုံစံတွေပေါ့။ အဲဒါတွေကြောင့် ဖြစ်တာပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီကိစ္စတွေက နောက်ပိုင်းမှာ ပြေလည်သွားပြီးတော့ ဒါမျိုးတွေ နောက်မဖြစ်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိရဲ့ လား။ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
စောတင်မိုသီ ။ ။ အဲဒါတော့ ကျနော်မပြောတတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ ဥပဒေအရ လုပ်သွားမယ်ဟာကရှိတယ်။ တိုင်းပြည်တခုကို အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာ ဥပဒေဆိုတာ ရှိရတယ်။ ဒီဥပဒေကို ဘယ်သူမှ ကျော်လွန်လို့မရဘူး။ ဘာစစ်သူကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဥပဒေကို ကျော်သွားလို့ မရဘူး။ အားလုံးက ဥပဒေလက်အောက်မှာ ရှိရမယ်။ ကျနော်တို့ ဝင်လာတုန်းကဆိုရင် သူတို့ကပြောတာက ဘာလဲဆိုတော့ ဥပဒေဘောင်အတွင်း။ အခု သူတို့က ပေါက်ကရ။ ကျနော်တို့ လူတွေမှားလို့ရှိရင် သူတို့ဖမ်းပြီးတော့ ထောင်ထဲထည့်တယ်။ အခု သူတို့မှားတဲ့အခါကြရင် ကျနော်တို့ကလည်း သူတို့လူကြီးတွေကို တောင်းဆိုပြီးတော့ မှားတဲ့လူတွေကို ထောင်ထဲထည့်တဲ့အပြင် လျှော်ကြေးလည်း ရှိရမယ်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့  ဆုံးသွားတဲ့လူတွေရဲ့  မိသားစုတွေကို ပေးရမယ်။ အဲဒီတော့ ဥပဒေနဲ့ ပြန်တောင်းဆိုရမယ်အပိုင်းတွေ ရှိတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ KNU-KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေကို မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင် စောတင်မိုသီ က ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။
Posted by ဇင်ယော် at 2:37 AM
temothy, you arealeader of Karen people was choosen and wasapastor. But you are notagood leader as I expect because you trust your father crazy dog burmese. then you will becomeacrazy dog. you already know that not body can trust crazy dog spdc, why you?
ဆရာတိမသေရဲ့ ရှိနေတဲ့ အနေအထားနဲ့ အခြေအနေတွေအရ သူ့တိုင်ကြားမယ့် အစီအစဉ်ဟာ မှန်ကန်ပါတယ်။ သူ့ကိုပါသတ်မှာစိုးလို့ ထွက်ပြေးမှာထက် အဲဒီလို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ပြောဆိုတာဟာ အကျိုးဘယ်လောက်ရှိလာမလဲဆိုတာ မသေခြာပေမဲ့ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။